Shanghai amadolobha iShayina elikhulu. IShanghai ingomunye w
ⓘ Shanghai amadolobha iShayina elikhulu. IShanghai ingomunye womasipala abane abaphethwe ngqo bePeoples Republic of China. Ingaphansi kokuphathwa okuqondile koMkh ..
Shanghai amadolobha iShayina elikhulu. IShanghai ingomunye womasipala abane abaphethwe ngqo bePeoples Republic of China. Ingaphansi kokuphathwa okuqondile koMkhandlu Wombuso waseChina. Idolobha lisogwini oluseningizimu yeYangtze, noMfula iHuangpu ugeleza ngalo. Ngabantu abayizigidi ezingama-24.28 kusukela ngo-2019, iyindawo enabantu abaningi kakhulu emadolobheni aseChina futhi idolobha lesibili elinabantu abaningi emhlabeni. IShanghai iyisikhungo somhlaba wonke sezezimali, ucwaningo, ezobuchwepheshe, ezokukhiqiza nezokuthutha, kanti iPort of Shanghai iyichweba lamabhasi elixakeke kakhulu emhlabeni.
IShanghai ichazwe njenge "mbukiso" womnotho odlondlobele waseChina. Iqukethe izitayela eziningi zokwakha ezifana ne-Art Deco ne-shikumen, idolobha laziwa kakhulu nge-Lujiazui skyline, iminyuziyamu kanye nezakhiwo zomlando-kufaka phakathi i-City God Temple, i-Yu Garden, i-China Pavilion kanye nezakhiwo ezise-Bund. IShanghai yaziwa futhi ngokudla kwayo okunoshukela, ulimi oluhlukile kanye nobukhazikhazi bamazwe omhlaba obunamandla. Njalo ngonyaka, idolobha liba nemicimbi eminingi yezwe neyamazwe omhlaba, kufaka phakathi iShanghai Fashion Week, iChinese Grand Prix, neChinaJoy. Ngo-2018, iShanghai isingathe umbukiso wokuqala we-China International Import Expo CIIE, okuwumbukiso wokuqala wezwe lonke wokungenisa.